ဝမ်ကိုက်ရွာကို အခု မီးရှို့နေပါပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း ရဲ နဲ့ တပ် ဘာမှ မလုပ်ပါ။ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ေ၇းမှူးကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီး အဖျက်လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်နေ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဥက္ကံအကြမ်းဖက်မှု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဆောင်ခဲ့၊ အပြင်ကလူတွေနဲ့ ဒေသခံတွေ စနစ်တကျ တိုက်ခိုက်
U Ye Htut, Hmuu Zaw, U Thein Sein and Sr General Min Aung Hlaing are guilty of COMMAND RESPONSIBILITY »
Another wrote>>>ဥက္ကံကို ဂျမာအသ်နဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ရောက်ဖူးတယ်။ သင်္ကြန်မှာ အမြဲ ခလောက်ကွန်ဒိုင်ကို ကျွန်တော်ဂျမာအသ်နဲ့ရောက်တယ်။ ၀ံကိုက်မှာ ဂျိုရ်သွားခဲ့တာ စိတ်ထဲမှာ ဟဂ်ျလုပ်ရသလားထင်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီဂျိုရ် အပြီးမှာဘဲ အလ္လာဟ်ရှင် ကျွန်တော့်ကို ဟဂ်ျဖတ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ ဓါတ်ပုံထွက်လာတဲ့ နေရာတွေအားလုံး ကျွန်တော်သိနေတော့ ပိုပြီး စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ။
Another wrote>>>သတင်းတွေကတော့ နေရာအနှံ့ပြန့်နေတယ်။ ပန်းဘဲတန်းကိုလည်း ဒီညဝင်လာမယ်လို့ သတင်းထွက်နေတယ်။ လောလောဆယ် ဥက္ကံနားက ဝမ်ကိုက်ရွာကို မီးရှို့နေတယ်လို့ ဥက္ကံကိုရောက်နေတဲ့ Ko DM မှ ဖုံးဆက်သတင်းပို့လာပါတယ် ။ ဒုအာလုပ်ကြပါ
ဥက္ကံမြို့နယ်အတွင်း ဧပြီ ၃၀ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်
ပဋိပက္ခအတွင်း မြို့တွင်းရှိ ဗလီနှင့် ဆိုင်ခန်းတချို့ပျက်စီးခဲ့ပြီး မြို့အစွန်ရှိ၏ ရွာသုံးရွာ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။
Buddhist Mobs Set Fire to Myanmar Villages -Associated Press —
Chit Hlaing Aung စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်
Tags: Arts, Comedy, Friends, Libraries, Programs, Sitcoms, Television, United States
This entry was posted on May 1, 2013 at 12:19 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.